Shirkani muxuu ka baddalayaa Somaliya, saamayn intee le’eg ayuuse ku yeelanayaa Somaliland? | Awdalpress.com
Shirkani muxuu ka baddalayaa Somaliya, saamayn intee le’eg ayuuse ku yeelanayaa Somaliland?
Waxa Daabacay staff-reporter on Feb 25th, 2012 and filed under OPINION. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.
Awdalpress – London – Sheekada siyaasadeed ee suuqyada Ingiriiska aadka la isugu maan dhaafsan yahay ayaa ah, in Madaxweyne Siilaanyo shirkii ka hadlay iyo kama uu hadlin…laakiin weli la isma weydiin saamayn intee le’eg ayuu ku yeelanayaa Somaliland, isbeddelka siyaasadeed ee uu u keeni karaana waa mid noocee ah.
Haddaba qormadeennan maanta ayaan ku falanqayn doonnaa arrimahaa shirka London la xidhiidha. Waxanan qodob qodob u eegeynaa sida uu shirkaasi ahaa, arrimaha lagaga hadlayey iyo sida ay siyaasiyiinta qurba joogga Somaliyeed amma Somaliland u kala arkeen.
Warkiisa halkan guji. Click Live Somali Conference From London
Calaamaddiisuna sidan ayey u egeyd.
Dadkii ka hadlay iyo madaxda fadhidayna halkaa ka daawo.
Hase yeeshee sida dad goob joog ahaa ay shabakadda awdalpress.com u xaqiijiyeen, Madaxweyne Ahmed Siilaanyo kama hadlin shirka, laakiin waxa ay dadka qaar u sheegeen shabakadda in markii la kala dareeray ee Somalidii la isku soo reebey su’aalo la weydiiyey maamul goboleedyadii ka soo qayb galay, mid walbana waxa loo oggolaaday saddex daqiiqo in uu ku sheego waxa uu yahay. Markaa ayaa dadkaasi sheegayaan in uu ka qayb qaatay, saxaafadduse ma qorin, xaqiiqduse waa mid weli innaga dahsoon, oo la sugayo.
Balse waxa dad badani la yaab ku riday, warka uu wasiirka arrimaha dibadda Somaliland uu ka sii daayey BBCda Somaliga ah, ee uu ku sheegay in Ahmed Siilaanyo uu 50 kii dawladood uu ka hor qudbadeeyey, warkaasi oo aan marna laga arag saxaafadda caalamiga ah iyo kuwii Somalida ee madasha joogtay, madaxdii shirka ka hadshayna halkan ka daawo:
1653 Khudbadihii maalintii shirka ka daawo lifaaqan. http://www.youtube.com/playlist?list=PL355FA9D26E47A9B0
Layaabkaa uu Wasiirku idaacadaha ka sheegay, ee warsaxaafadeedkana uu ugu gudbiyey shabakadaha laga leeyahay Somaliland qaarkood ayaan jirin. Waxana dad badani isla dhex marayaan in uu wasiirku dhaqan u leeyahay siyaasadda noocan ah, oo aanay cidi maanta ka rumaysanayn.
Dadka qaarna muhiim uma aha in Ahmed Siilaanyo qudbadeeyey iyo in kale, waxase ay rabaan in shacabka runta loo sheego, oo siyaasadda Somaliland ay noqoto mid ku qotonta run. Haddii kale bay leeyihiin waxa ay luminaysaa kalsoonidii shacabka.
Shirku saamayn intee le’eg ayuu ku yeelanayaa Somaliland?
Beesha caalamka ee uu Ingiriisku hoggaaminayaa waxa ay u soo tafa xaydatay in ay u kuur gasho maamullada Somalida, ee uu dhaqaalaha badani kaga baxo, waxana arrintaa aad uga shaqaynaya hay’adaha nabad sugidda iyo xuquuqda aadamaha iyaga sida MI5- ka , CIA – da iyo kuwo kale oo maanta xogo badan ka haya guud ahaan iyo gaar ahaanba Somaliya iyo Somalida, iyaga oo kaashana saxaafadda, aqoon yahannada iyo ururrada samafallada ah ee caalamiga ah amma maxalliga ah, gudo iyo dibadba. Waxana ka go’an in ay ammaanka Somaliya iyo Somalilandba faraha geliyaan….ra’iisal wasaaraha Ingiriiskuna waxa uu si cad u sheegay in aanay eegan doonin dad la iska laynayo.
Meelaha isha gaar lagu hayana marka laga soo tago koonfurta Somaliyana, waxa ugu horreysa Somaliland oo dhawaan ay dagaallo ka dheceen gobollada bariga. Markhaatina waxa ugu filan bannaanbixii ay shacab ka soo horjeeda Khaatumo iyo Awdal State ku hor bannaan bexeen goobtii shirka iyaga oo watay boodhadh ay ku qoran yihiin dhiillooyin Somaliland ka dhacay sida dagaalkii Kalshaale, dagaalkii Buuhoodleh iyo gawaricii ka dhacay Kala-baydh iyo Seemaal, dhibtaasi oo ay bannaanbaxayaashii dusha u saareen dawladda Somaliland. Sidoo kale waxa ay qaybiyeen warqado ay kaga soo horjeedaan wax ay ku sheegeen cabudhin iyo xoog ay u sheeganayso shacabka aan oggolayn gooni isu taagga Somaliland.
Laakiin dhanka kale waxa ka muuqata rajo ay beesha caalamku ka qabto in la hagaajin karo dhibaatooyinka amni amma caddaaladeed ee ka jira Somaliland, maaddaama ay ka xasilloon tahay Koonfurta. Waxasa madashii loo sheegay Somaliland in ay qayb ka yihiin Somaliya, beesha caalamkuna ay sidaa ku shaqaynayso….Somalilandna laga rabo in ay wada hadal toos ah la yeelato dawladda TFGda.
Xaqiiqaduse waxa weeyi in aanay dhacayn maamul Muqdisha yaalla oo ka taliya amma ka talin doona dhammaanba gobollada Somaliya oo ay Somaliland ku jirto. Xataa haddii uu madaxweynuhu noqdo reer Somaliland, waxa shacabka Somaliland intooda badan ka go’an in aanu dhex iman karin Hargeysa.
Waxase dhinac barba yaalla in arrintaa lagaga hor tagi karo in cuna qabatay dhinaca dhaqaalaha iyo horumarka lagu sameeyo. Haddii ay Somaliland ka baxdo shuruudaha maanta ay aqbashay. Waxa kale oo ku iman kara in uu culays aanay qaadi karini kaga yimaaddo beesha caalamka. Sidaasi daraaddeed ayaa ay dawladda Ahmed Siilaanyo iyo siyaasaddeeda arrimaha dibaddu uga baqaysaa in ay dadka runta u sheegto.
Dad badan oo aan warsannay laakiin ka gaabsaday in magacyadooda la shaaciyio ayaa shirkani maanta Somalida loo qabtay ku sheegay mashruuc bilow ah oo ay Ingiriiska iyo Turkigu hoggaaminayaan, immigana loo ballansan yahay bisha June in mar kale lagu qabto Turkiga, oo ay Somalilandna qayb ka tahay.
Waxase ay is weydiinayaan in shirka soo socda ee Turkiga ka dhici doona bisha 6aad ee sannadkan, ay dawladda Somaliland shacabkeeda u sheegi doonto Ictiraafkii ayaan halkaa kaga soo hadlaynaa, mise in saamiga dawladeed ee ay rabaan ay madashaa kaga yoo yootami doonaan.
La soco qaybata dambe iyo xaqiiqada ku xeeran siyaasaddan cusub ee lagu dhiqi doono Somalida.